ကင်ဆုဟွန်း သည် တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားသရုပ်‌ဆောင်ဖြစ်ပြီး သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများဖြစ်သည့် Dream High ၊ Moon Embracing the Sun ၊ My Love from the Star ၊ The Producers ဇာတ်လမ်းတွဲနှင့် ရုပ်ရှင်ကားများဖြစ်သည့် The Thieves ၊ Secretly, Greatly နှင့် စစ်မှန်သော တို့ဖြင့် ကျော်ကြားသူဖြစ်သည်။
ကင်သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Gallup Koreas Actor of the Year ကိုရရှိခဲ့သည်။ သူသည် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဖို့စ်မဂ္ဂဇင်း၏ ကိုရီးယား ဩဇာကြီးမားသော ကိုရီးယားကျော်ကြားသူများစာရင်းတွင် စတုတ္ထနေရာချိတ်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပဉ္စမနေရာတို့တွင် ရရှိခဲ့သည်။ ဖို့စ်စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်း၏ အာရှထုတ်ဝေမှုတွင် ကင်အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၏ 30 under 30 စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အာရှတခွင်တွင် သူ၏ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများ၏ အောင်မြင်မှုသည် သူအား ထိပ်တန်းဟေးလျူကြယ်ပွင့်top Hallyu star ဖြစ်စေခဲ့သည်။
အထက်တန်းကျောင်းသွားဘဝတုန်းက ကင်၏ မိခင်သည် ကင်အား သူ၏ တသီးတသန့်နေလိုသော အမူအကျင့်ကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် အကူအညီဖြစ်စေရန်အလို့ငှာ သရုပ်ဆောင်အတန်းများကို ယူရန် အားပေးခဲ့သည်။ သူ၏ဖခင် ကင်‌ဂျောင်ဟွန်းသည် ၈၀ ခုနှစ်များက ဂီတအဖွဲ့ဖြစ်သည့် "Seven Dolphins" ဂီတအဖွဲ့မှ အဓိက အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကင်သည် ချောင်အန်းတက္ကသိုလ်၏ ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်ဌာနFlim and theater Departmentတွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၌ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကင်၌ ကင်ဂျူနအဆို‌တော် အဖေတူမအေကွဲ ညီမရှိသည်ဟု ထုတ်ဖော်​ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူ၏ ဝမ်းကွဲညီအကိုတော်သူ လီ‌ဆာရန်းမူရင်းအမည် လီဂျေယန်း ရိုက်ကူးခဲ့သော Real 2017 တွင် နောက်ဆုံးပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
2.1. ဘဝဖြတ်သန်းမှု ၂၀၀၇–၂၀၁၀: ရုပ်သံသရုပ်ဆောင်အဖြစ် အစောပိုင်းဖြတ်သန်းမှု
ကင်သည် သူ၏ ပထမဆုံးသော သရုပ်ဆောင်ဘဝကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်ထုတ် မိသားစု ဟာသဇာတ်မြူးဖြစ်သော Kimchi Cheese Smile ဇာတ်လမ်းတွင် ဇာတ်ပို့နေရာမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် KBS မှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော Jungle Fish ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် အဓိကဇာတ်ဆောင်နေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲသည် ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်တွင် အခြေတည်ပြီး ထိုဇာတ်လမ်းကြောင့် ကျောင်းတွင်းအနိုင်ကျင့်များကို အရေးယူခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်လမ်းသည် Peabody Award အပါအဝင် ဆုတစ်ချို့ကို ရရှိခဲ့သည်။
နှစ်ဝက်လောက်အကြာတွင် ကင်သည် အစားအစာကိုအခြေခံသော ရုပ်သံအစီအစဉ်ဖြစ်သော Delicious Quiz also known as The Taste of Lifeတွင် အစီအစဉ်မှူးများထဲက တစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဟုခေါ်သော Cherry Blossom ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကင်သည် နမ်ကွန်ဆန်းရိုက်ကူးသော Worst Friends ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Mise en Scène Short Film Festival တွင် ပြသခဲ့ရာ လူမှုရုပ်ရှင်ကဏ္ဍတွင် အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆု ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် SBS ရုပ်သံမှ Fathers House ဇာတ်လမ်းကို စစ်ပြန်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ချိုင်မင်ဆိုနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ထိုနှစ်တွင်ပဲ Mnets Boys & Girls Music Countdown တွင် Kara အဆိုတော်အဖွဲ့မှ ဟန်ဆောင်ယွန်းနှင့်အတူ ပူးတွဲအစီအစဉ်မှူးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ကင်သည် Will It Snow for Christmas? နှင့် Giant ဇာတ်လမ်းတွဲတို့တွင် အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်တို့၏ ငယ်ဘဝကို သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ သူ့အားလူသိများလာစေခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Giant ဇာတ်လမ်းတွဲဖြင့် SBS Drama Awards ၏ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်သစ်ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။
2.2. ဘဝဖြတ်သန်းမှု ၂၀၁၁–၂၀၁၃: ထိုးဖောက်အောင်မြင် လာခဲ့ခြင်း
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် လူငယ်ဂီတဒရာမာအမျိုးအစားဖြစ်သော Dream High တွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ လူတိုင်ကြား၌ ကင်၏အမည်သည် ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွင် သူသည် တောသားလူရိုးဘဝမှ ဂီတပါရမီ ထူးချွန်မှုကို ထုတ်ပြနိုင်သူတစ်ဦးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုဒရာမာဇာတ်လမ်းကို ပြည်တွင်း၌ကြည့်ရှုနှုန်း မြင့်မားခဲ့ပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားထိပါ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင် များစွာသော နိုင်ငံတကာဆုများလည်း ရရှိခဲ့သည်။ ကိုရီးယားအိုင်ဒဲလ်တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခန်းများတွင် မင်းသားသစ်ဖြစ်သော ကင်သည် ဇာတ်လမ်းအတွက် လိုအပ်သော အခန်းများကို ဆွဲထုတ်ပြီး JYP Entertainment တွင် သုံးလမျှ သီဆိုမှုနှင့် အကကို လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ သူသည် ထိုဇာတ်လမ်းအတွက် "Dreaming" သီချင်းအား တကိုယ်တော်နှင့် ဇာတ်လမ်းအမည်နှင့် သီချင်းဖြစ်သော "Dream High" ကို အခြားသော သရုပ်ဆောင်များနှင့်တွဲဖတ်၍ ဇာတ်ဝင်တေး ၂ ပုဒ်ကို သီဆိုခဲ့သည်။
ကင်သည် Moon Embracing the Sun ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ငယ်ရွယ်‌သူဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သော လီဝမ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ အောင်မြင်မှု အမြင့်ဆုံးထိပင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုရုပ်သံဇာတ်လမ်း၏ ကြည့်ရှုနှုန်းမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် ၄၂.၂ ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့သဖြင့် "နိုင်ငံတော် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ" ဟုသော အမည်ပင် ရရှိခဲ့သည်။ ကင်သည် ရိုးရာသီချင်းကြီးပုံစံဖြင့် ရေးဖွဲ့ထားသော "Only You" နှင့် ခေတ်ပေါ်ပုံစံဖြင့် ရေးဖွဲ့ထားသော "Another Way" ဇာတ်ဝင်တေးနှစ်ပုဒ်ကို ထိုဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် သီဆိုခဲ့သည်။
သူ၏ ကျော်ကြားမှုကြောင့် ထုတ်ကုန် ၁၇ မျိုးအတွက် ထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ထောက်ခံချက်အတွက် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး စံချိန်သစ် တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် သူသည် Best TV Actor award ကို 2012 Baeksang Arts Award တွင် ရရှိခဲ့သည်။ ထိုဆုကို စစ်ပြန် ဩဇာကြီးမားသည့် သရုပ်ဆောင်များဖြစ်သည့် Han Suk-kyu, Shin Ha-kyun နှင့် Cha Seung-won တို့ကို ကျော်ဖြတ်ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ကင်က "ဆုရရှိတဲ့ အတွက် အလွန်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ရှက်လည်းရှက်မိပါတယ်။ အိမ်စာတွေအများကြီး ရနေသလိုပဲ။ ဒီဆုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့ ကျွန်တော် ဆက်ပြီးကြိုးစားသွားပါ့မယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Ocean Eleven ၏ ကိုရီးယားပုံစံဇာတ်ကားဟု မီဒီယာများက အမွှန်းတင်ကြသော The Thieves ရုပ်ရှင်တွင် နာမည်ကြီးရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်များနှင့်အတူ ပထမဆုံးသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ လတ်မှတ်အစောင်ရေ ၁၂.၉ မီလီယံကျော် ရောင်းချခဲ့ရပြီး ကိုရီယားရုပ်ရှင်သမိုင်းတွင် ဒုတိယမြောက် အမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့သော ရုပ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ကင်သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ကြောင်နေသူတစ်ဦးအဖြစ် စိမ့်ဝင်နေသော မြောက်ကိုရီးယား သူလျှိုအဖြစ် ဟန်၏ Covertness ဝပ်တွန်းစီးရီးကို ရုပ်ရှင်အဖြစ်ရိုက်ကူးထားသော Secretly, Greatly ရုပ်ရှင်တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည် များစွာသော စံချိန်တို့ကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ရုံမျှမက ‌ထိုနှစ်၏ box office တွင် အ‌အောင်မြင်ဆုံးသော ရုပ်ရှင်တွေထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်ကားကြောင့် ကင်သည် 50th Grand Bell Awards တွင် အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်သစ်ဆုနှင့် 50th Baeksang Arts Awards တို့ကို ရရှိခဲ့သည်။ Kim won Best New Actor awards at the 50th Grand Bell Awards and the 50th Baeksang Arts Awards.
2.3. ဘဝဖြတ်သန်းမှု ၂၀၁၄–လက်ရှိ: နိုင်ငံတကာသို့ ကျော်ကြားခြင်း
၂၀၁၃ မှ ၂၀၁၄ ခနှစ် အစောပိုင်းကာလတွင် ကင်သည် SBS ၏ စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သည့် My Love from the Star ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် မင်းသမီး ဂျွန်ဂျီဟွန်းနှင့်အတူ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် ဇာတ်ဝင်တေးနှစ်ပုဒ်ဖြစ်သော "In Front of Your House" နှင့် "Promise" သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲသည် တရုတ် အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ဝဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သော iQiyi တွင် ကြည့်ရှုသူ ၃ ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့ပြီး ထိုရုပ်ရှင်တွင်ပါဝင်ခဲ့သော ဖက်ရှင်၊ မိတ်ကပ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်မှအစ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကင်သည် အာရှတခွင်တွင် အကြီးအကျယ် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး ထုတ်ကုန် ၃၅ မျိုးအတွက် အလိုရှိဆုံးသော အမှတ်တံဆိပ်ထောက်ခံပေးသူထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၇ ကြိမ်မြောက် Korea Drama Awards တွင် ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲများအတွက် အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်သော ဒေးဆန်းဆုသို့မဟုတ် "Grand Prize" ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။
ထိုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွင် ကင်သည် နိုင်ငံတကာ အားကစားပွဲတော်နှစ်ခုကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ နန်ကျင်းမြို့၌ ကျင်းပသော ၂၀၁၄ ခုနှစ် နွေရာသီ လူငယ် အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်၏ ဖွင့်ပွဲတွင် များစွာသော အနုပညာရှင်များနှင့်အတူ တရားဝင်သီချင်းဖြစ်သော "Light up the Future" သီချင်းကို သီဆိုခဲ့သည်။ သူသည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ အင်ချွန်းမြို့တွင် ကျင်းပသော ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာရှ အားကစားပွဲတော်၏ ဖွင့်ပွဲတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဂျန်ဒေါင်ဂန်း၊ ကိုရီးယား အော်ပရာအဆိုတော် အန်ဆွတ်ဆန်းနှင့် နိုင်ငံ ၄၅ ခုမှ လူပုဂ္ဂိုလ်မျနှင့်အတူ "One Asia" စကားလက်ဆောင် ပေးပို့သည့် ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကင်သည် KBS ရုပ်သံဌာနမှ ရိုက်ကူးသော The Producers ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲမှာ My Love From the Star အား ရေးသားခဲ့သူ စာရေးဆရာ ပတ်ဂျီအွန်းမှ ရေးသားခဲ့သော ဇာတ်လမ်းလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲသည် ပြည်တွင်းပရိတ်သတ် ကြည့်ရှုနှုန်း အခိုင်အမာရရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာအနေဖြင့် နိုင်ငံများစွာသို့ ရောင်းချခဲ့ရသည်။ ထို့ပြင် ကင်သည် ၈ ကြိမ်မြောက် Korea Drama Awards ဆုပေးပွဲတွင် ဒေဆန်းဆုကို နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံရရှိခဲ့သည်။ ထိုမျှမကသေး သူ၏ သရုပ်ဆောင် ကောင်းမွန်မှုကြောင့် 4th APAN Star Awards နှင့် 2015 KBS Drama Awards တို့ကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။ ကင်သည် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တို့တွင် အခိုင်အမာအောင်မြင်မှုရှိသည့် အသက် ၃၀ အောက် ဩဇာတိက္ကမရှိသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၃၀ အား ရွေးချယ်ထားသော ဖို့စ်မဂ္ဂဇင်း၏ "30 Under 30 Asia 2016 list" စာရင်းတွင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။
ကင်သည် မူခင်းဒရာမာအမျိုးအစားaction-noir၊ အတ္တနှင့် လိင်မှုအသားပေး ဇာတ်ကားဖြစ်သော Real တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ပြသခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် KeyEast အေဂျင်စီမှ နှုတ်ထွက်ပြီး သူ၏ဝမ်းကွဲ ညီအကိုနှင့် အေဂျင်စီတစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့သည်ဟူသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ကင်သည် Kim Sae-ron၊ Seo Ye-ji တို့နှင့်အတူ Gold Medalist အေဂျင်စီဖြင့် လတ်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကင်သည် tvN ရုပ်သံမှ Its Okay to Not Be Okay ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ‌တွင် စိတ်ရောဂါကုသရေးဆေးရုံမှ ဆေးဝန်ထမ်းအကူအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲမှာ The Producers ဇာတ်ကားပြီးကတည်းက ၅ နှစ်အကြာမှ ပထမဆုံးအကြိမ် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။